Dagaalkii Guriceel kadib, Ahlusunna maxaa u qorshaysan | Dayniile.com
Home Warkii Dagaalkii Guriceel kadib, Ahlusunna maxaa u qorshaysan
Guddoomiyaha guud ee Ahlu Sunna Wal Jamaaca, Sheekh Maxamuud Sheekh Xasan Faarah, ayaa arrimo badan uga hadlay wareysi khaas ah oo uu siiyay laanta Af Soomaaliga ee BBC-da.
Mowduuca diiradda la saarayay waxa uu ahaa mowqifkiisa ku aaddan xaaladda Galmudug kaddib dagaalkii dhawaan dhex maray ciidamada Ahlu Sunna iyo kuwa maamulka Galmudug oo la sheegay inay gacan ka helayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya.
Dagaalkaas ayaa soo idlaaday kaddib markii xoogagga Ahlu Sunna ay ka baxeen magaalada Guriceel oo ahayd halka lagu dagaallamayay, waxaana wixii xilligaas ka dmabeeyay ay hoggaanka Ahlu Sunna sheegeen in qorshahoodu uu yahay “in ay sii wadi doonaan fikirkii ay ku shaqeynayeen iyo qaabkii ay u shaqeynayeen, oo ahayd inay dadkooda iyo shacabkooda u hiilliyaan mar kasta oo ay uga baahdaan,” sida uu BBC-da horay ugu sheegay madaxa siyaasadda ee Ahlu Sunna, Cabdisalaan Aadan Xuseen.
Sheekh Maxamuud Sheekh Xasan ayaa isla arrintaas sii xoojiyay, isagoo qodobo kalena carrabka ku adkeeyay, una muuqday in waxyaabo badan ku dhaliilsan yahay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug labadaba.
Previous articleGuddoomiyaha Gedo: Garbahaarey waa diyaar oo waa lagu qaban karaa Doorashada Golaha Shacabka BFS.
Next articleCiidanka dowladda oo howlgal ka bilaabay Muqdisho kadib amarkii Xijaar
Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid, ayaa furay Shirka agaasimeyaasha guud ee wasaaradaha iyo hay’adaha madaxa bannaan ee Galmudug oo maanta ka qabsoomay magaalada...
Qoorqoor oo digniin u diray Culimada hubeysan ee Ahlusunna
Dowlada Uganda oo shegtay In Qaraxii saaka gilgilay Kampala ay ku...
Darawaliin u shaqeynayay Qaramada Midoobey oo xabsi ku yaalla Itoobiya laga...